Fialan-Tsasatra Isan-Taona, Karama Amin'ny Andro Tsy Fiasana - Votresalaire.org/Madagascar
Accueil Droit du Travail Congé Annuel et Vacances Fialan-tsasatra
Fialan-tsasatra handraisan-karama / fialan-tsasatra isan-taona
fahakeliny 30 andro fiasana rehefa aorian'ny 12 volana feno niasana tsy misy fiantoana (and. 86). Ny mpiasa lahy na vavy dia mandray ampaha-roambinifolon’ny fialan-tsasatra isan-taona alohan'ny handehanana amin'ny fialan-tsasatra isan-taona. Ny mpampiasa sy ny mpiasa dia mila mifandamina tsara mikasika ny fotoana hialan-tsasatra. Ny fialan-tsasatra dia afaka hangonina mandritra ny telo taona. Ny fialan-tsasatra dia azo tsinjaraina, saingy fotsiny raha mihoatra ny roa herinandro. Ny ampaham-pialan-tsasatra voalohany maharitra dimy ambin’ny folo (15) andro dia tsy maintsy alaina mandritra ny telo (3) volana manaraka ny nisokafan’ny zo hahazo fialan-tsasatra. Ny ampaham-pialan-tsasatra faharoa dia azo alaina alohan’ny faran’ny taona diavina, na angonina mandritra ny telo taona. (And. 86-89 anaty Lalàna momba ny Asa)
Karama amin'ny andro tsy fiasana
Ny mpiasa dia manana zò tsy hiasana amin'ny andro fety nefa handraisan-karama (ara-panjakana na fivavahana) (and. 81). Ny andro fety dia hambaran'ny Fanjakana Malagasy amin'ny fiandohan'ny taona (amin'ny ankapobeny miisa 13). Ny andro tsy fiasana fa andraisan-karama dia voafehin'ny didim-panjakana. Ireo dia : Andro voalohan'ny Taona (1 janoary), Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy (8 martsa), Alahady sy Alatsinain'ny Paska, Fankalazana ny Fihetsehana 1947 (29 martsa), Fetin'ny Asa (1 may), Alakamisy Fiakarana, Alahady sy Alatsinainy Pantekoty, Fetin'ny Fahaleovan-tena (26 jiona), Fiakaran'ny Masina Maria, Fetin'ny Olomasina (1 novambra) sy Noely (25 desambra). (Didim-panjakana laharana faha-2006-002 tamin'ny 3 janoary 2006, mametra ireo lisitry ny andro tsy hiasana fa handraisa-karama ho an'ny taona 2006)
Fakana aina isan-kerinandro
Ny mpiasa dia manana zò 1 andro hakana aina isan-kerinandro (24 ora misesy farafahakeliny) (and. 80). Ny andro hakana aina isan-kerinandro dia matetika isan'alahady. Tsy misy fitsipi-dalàna manokana milaza mazava fa ny mpiasa dia manana zò hahazo iray andro hakana aina ho onitra raha tokony hiasa izy ny asabotsy sy alahady.
Fitsipika mifehy ny asa sy ny fialan-tsasatra
Tambin-karama Asa sy Karama Fitondrana Vohoka sy Asa Asa sy Aretina Conventions collectives - base de données
Citer cette page © WageIndicator 2017 - Votresalaire.org/Madagascar - Fialan-tsasatra